KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Mid kamid ah Shaqaalaha Canshuurta ee TFG-da oo Xalay lagu Dilay Baydhabo
Monday 2 April 2012 11:07
Mid kamid ah Shaqaalaha Canshuurta ee TFG-da oo Xalay lagu Dilay Baydhabo
Baydhabo (Keydmedia) - Dilalka Qorsheysan ee xiliyada habeenkii ah loo geysanaayo Saraakiisha iyo Masuuliinta dowladda TFG-da ka tirsan ayaa caadi ka noqday magaalooyinka ay kamid yihiin Baydhabo, Baladweyne iyo Caasimada Muqdisho.
Xalay waxaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobbolka Bay lagu khaarijiyay mid kamid ahaa shaqaalaha dhanka cashuurta ee dowladda TFG-da.
Ninkaan ka tirsanaa shaqaalaha dowladda ayaa ahaa nin da'a ah waxaana toogtay ragg wajiyada soo duubtay oo Bastoolado ku hubeysnaa, ayadoonka ninkaan lagu toogtay meel u dhow xaafada uu magaalada Baydhabo ka daganyahay.
Raggi dilka geystay ayaa islamarkiiba goobta uu dilka ka dhacay ka baxsaday, ayadoona dilka kadib ay howlgallo ballaaran sameeyeen Ciidamada amaanka ee dowladda ee magaalada Baydhabo, mana jirto cid ilaa iyo hadda dilkaasi loo soo qabtay.
Si kastaba magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo iyo Baladweyne oo ay dhawaan la wareegeen Ciidamada dowladda iyo kuwa Itooya ayaa waxaa xiliyada habeenkii ah ka dhaco dilalka qorsheysan ee lala bar tilmaamaysanaayo shaqsiyaadka dowladda TFG-da ka tirsan.